Inkqubo yokuBekwa kwiHlabathi njengeprojekthi efanelekileyo yezenzululwazi-iGeofumadas
Inkqubo yokuBekwa kwiHlabathi njengeprojekthi efanelekileyo kwezenzululwazi
Meyi, 2012 Apple - Mac, Iiphotography, Ukufundisa i-CAD / GIS
Inzululwazi yonyana wam ibuyile, kwaye emva kweengxoxo ezininzi notitshala malunga nezinto ezinokwenzeka kwiprojekthi, ekugqibeleni bayivumile enye apho atsibe khona phantse imitha yovuyo ... Ndiphantse zombini kuba sisihloko esisithandayo sobabini. . Kananjalo ngenxa yokuba le projekthi yeyantlandlolo, sigqibe kwelokuba singakhangeli kwi-Intanethi nangakumbi ngento esele yenziwe ngumntu wonke kunye nesona sizathu siphambili sokuba isiqingatha siqhele ukwaliwa okanye siphindwe.
Ngaphandle kokuba ube ngunyaka obalulekileyo, kuba i-13 lelo nqanaba nje xa beqala ukubuza igunya, ukungabikho kokusesikweni kobomi, phakathi kwabantwana nabakwishumi elivisayo kuye kwafuneka ndichithe ixesha elithe chatha kwimicimbi esingabelaniyo ngayo. Inkwenkwana enkulu, enekamva elithembisayo kwihlabathi lezentengiso kunye netekhnoloji ... nangona iminyaka eliqela isaza kuphinda ikufumanise ukuzithemba kwayo kwizinto ezifanelekileyo kwaye yahlule into engenaxabiso ijolise kuyo.
Ifoto esekunene ikhangeleka ngathi yayizolo, xa ndafumana ukwaliwa kosapho ngokufaka isitshetshe se-zero. Haha, bayibanga kum iintsuku ezininzi, ngoku abangasayibaliyo kuba loo foto ibinomdla.
Ukubuyela kumxholo weprojekthi, kumalunga nokubonisa ukusebenza kweNkqubo yeGPS. Ngenxa yoku kufuneka sisebenze ngempelaveki, sisenza indawo phakathi kwengxolo engangosuku loMama; Kuya kufuneka wakhe umfuziselo wehlabathi, kunye nemijikelezo yeenkwenkwezi zesathelayithi, amazwekazi atsaliwe, ubude kunye nobude. Ngale nto, uya kuchaza ukuba isebenza njani indawo yolungelelwaniso lendawo, ukuba umxhuzulane uvumela njani izinto ukuba zibekwe kwi-orbit kunye nokwamkelwa kwalo mqondiso ovela kwizixhobo ezine-GPS edityanisiweyo.
Emva koko nge-iPad iya kubonisa apho i-satellites iya khona, ukuba nangona ayibonakali, kukho isicelo esivumela ukuba ufanise ukujika kwayo esibhakabhakeni.
Kwaye okokugqibela uyakucacisa ukuba le nkqubo, kunye ne-gps eyamkela ukuba iifowuni eziphathwayo kunye nezicelo eziphuhlisiweyo ngoku zizisa, vumela i-geolocation, ibonisa uGoogle Earth kunye nendawo abakuyo esikolweni. Owu, ndifuna ukuyibona loo nto ngoba into yokudlala iyiphatha njengeNkwenkwe Yomdlalo.
Ngoko, ngokungafani noxinzelelo lweveki yokugqibela kunye nokuwa kwesiza, ngoku ndinezinto ezizonwabisa kakhulu, kufuneka ndibuye ndizithenge iindawo ezifanelekileyo zokukhusela i-iPad nayiphi na ingozi, ukuqeqesha le nkwenkwe ukuze okungaphezu kokuphindaphinda njenge-parakeet ichaze into ngaphezu kweyona geography kwaye ngaphezu kwayo yonke, yiqeqeqe ukuze ingayi kudala ukuphazamiseka ngokuziqhayisa ngokukwazi kwayo ukudlala i-Iron-man ... Njengoko nje unokuyenza!
Kunyaka ophelileyo kunye isitofu segesi uphumelele kwindawo yokuqala eklasini, esikolweni nakwimidlalo yesikolo eyinkunzi. Ngokungafaniyo, ngeli xesha akazukuhamba kwiqela, kwaye ... kwisifundo esinomdla.
Siza kubona indlela ehamba ngayo ...
Post edlulileyo«Ngaphambilini ICadastre, ichazwe kwinguqu eyaziwayo
Post Next Baphi abasebenzisi be-GvSIGOkulandelayo »
2 Iimpendulo "kwiNkqubo yokuBekwa kwiHlabathi njengeprojekthi efanelekileyo yezesayensi"
UCarlos Hernan uthi:
U-Biencausita wena ukuba uyazi, ndibhalela ePeru kwaye ndifumana umdla kwaye luncedo kwiphepha lakho, imibingelelo kunye nempumelelo eninzi.